Malunga nathi-Shijiazhuang hongmeida Trading Co, Ltd.
Uhlobo lwegloves yeCotton
I-Cotton glove ene-Snap
Isiqingatha seminwe esisiqingatha
Ngokuqinisekileyo i-Grip glove
Ukusetyenziswa kweCotton glove
I-glove ebhendi kaMatshi
Ukusebenza kweCotton Glove
Iparade kunye neCrymbourg yeGlobal
IGlove / iiSokisi ze-SPA
UDelve Velcro Glove
Uvavanyo lokukhusela ukhuseleko kwisandla
Umqhaphu weCotton Deluxe
Ngokuqinisekileyo iGrip Deluxe Gloves
I-fleece kunye neGlobal yezeMidlalo
Cofa isikrini seFleece Screense
I-Mamel Embroidery glove
Imisonto ye-Potton Embroidery
I-gloves ye-Nylon Embroidery
I-Canvas Ukusebenza kweGlobal Hotmill
Senza izinto ngokwahlukileyo, kwaye yindlela esithanda ngayo!
I-Shijiazhuang hongmeida Trading Co, Ltd ngumvelisi wegloves oqinisekiswe yi-ISO9000, ISO14001 kunye ne-ISO18001. Inkampani yethu yasungulwa ngonyaka ka-2000. Emva kweminyaka engama-20 yophuhliso oluqhubayo, siye saba ngabona menzi mkhulu wegloves kumantla eChina. Okwangoku, umzi-mveliso wethu unabasebenzi abangaphezu kwama-800 kunye neeseti ezingaphezu kwe-1000 yezixhobo ezahlukeneyo. Inkampani inesebe lezamashishini, isebe lokuqinisekisa ngemveliso, uphando lwetekhnoloji kunye nesebe lophuhliso, isebe lokuthenga, njl njl. Umzi mveliso wethu ikakhulu uvelisa iigloves zekotoni, iigloves zokuziphatha, iigloves zepolyester kunye nezinye iigloves zokuthunga.
Ifilosofi yethu yeshishini "ngumthengi kuqala, ojolise kumgangatho", ukubonelela abathengi ngeemveliso ezanelisayo kunye neenkonzo ezisemgangathweni yinjongo yethu kanaphakade.
Singanceda ukwenza ishishini lakho libe ngcono
Izinto ezilungileyo zegloves esemgangathweni: Iipesenti ezingama-100 ezinde ezenziwe ngumqhaphu kwi-Xinjiang, ipolyester, ikotoni exutywe nomqhaphu, ikotoni ene-spandex, polyester ene-spandex, i-satin ect.
Izitayile zegloves ezahlukeneyo: sinezitayile ezingaphezu kwe-60 ezahlukeneyo zeglavu kunye neiglavu zekotoni, iigloves zenyama, iigloves zomtshato, ezifana nokuhombisa, umgca ophindwe kabini kwi-cuff, ixesha elide, isiqaqa esiqinisekileyo, i-Deluxe ngokuqinisekileyo grip Velcro kunye ne-loop, iigloves ezingenamunwe.
Amaxabiso okhuphiswano: Sifumene kumantla e-China, emaphandleni, ke iindleko zabasebenzi ziphantsi kune-China. Sikwimizi-mveliso, HAYI inkampani yokuthengisa, evela kumzi-mveliso ngqo. Konke esikwenzayo, ukunciphisa iindleko zakho zokuthenga, kunye nokuqinisa ukhuphiswano lwentengiso yendawo yakho. Ukuthenga ngokuthe ngqo kumzi mveliso weGlove yeHMD kuya konga ixesha lakho kunye neendleko.
Umgangatho oqinisekisiweyo ukusuka kwizinto eziluhlaza ukuya kwiglavu egqityiweyo: Umzi mveliso weGloves weHONGMEIDA yindawo ye-ISO9001 esemgangathweni eyimfuneko, siza kulandela inkqubo yolawulo lomgangatho lwe-ISO9001.
Kukho abasebenzi abangaphezu kwe-800 kumzi-mveliso wethu, kwaye ngaphezulu koomatshini abayi-1000, ixesha lokuhanjiswa liqinisekisiwe.
Emva kwenkonzo yentengiso
Sinikezela emva kwenkonzo yentengiso, ukuba unemibuzo okanye ingxaki emva kokufumana iiglavu, ungasinxibelelana nathi, siya kukuphendula kwaye sikunikeze isisombululo ngaphakathi kweeyure ezili-12.
Umbono weshishini lethu "nguMgangatho wokuqala, uMthengi kuqala", sizinikezela ekubeni liqabane lakho elithembekileyo eTshayina.
1. Vavanya yonke impahla yoku-odola, jonga ubungakanani bendwangu, isitayile esijingiweyo, umbala ngokukhawuleza
Yenza isampulu yokuvunywa kwakho ngaphambi kokuveliswa kobunzima
3. Ukuhlolwa kokuqala xa isinyithi
4. Isibini sokuhlola isibini ngambini ngaphambi kwephakeji, jonga iigloves nganye esandleni.
5. Uvavanyo lwesithathu liqela lethu le-QC, khetha kwiphakheji egqityiweyo ngokungakhethiyo ngokwe-AQL2.5
6. Uvavanyo lwesine ngenkonzo yentengiso, khetha kwiphakheji egqityiweyo ngokungakhethiyo ngokwe-AQL2.5
7. Ukuhlolwa kwesihlanu ngumthengi okanye umntu wesithathu: thumela isampuli yokuthumela kubathengi ukuze yamkelwe ngaphambi kokuthumela.
Ukusetyenziswa ngobubanzi: Ukusebenza, iArhente yeZityalo zeNyukliya, uMziveliso wombane, Gcina ukufudumala, uMatshi ngoKhuphiswano, iBarhente, iCotillion, iCawe, iDormo, iEzzema, Inkonzo yokutya, okusesikweni, umngcwabo, iiKwayara zeeNtsimbi zeZandla, ukuBuka iindwendwe, uMkhosi, iParadise, iSanta Claus, iyunifomu, Usher, ulungile kunye neengxaki ze-lotions kunye ne-eczema.
Ifowuni:+86 139 3382 3597
Uxinzelelo:No. 553 isitalato i-Taihua, isithili iXinHua, Shijiazhuang Hebei, China
Iigloves zaMhlophe zePotton, I-White Cotton glove, Iigloves zeCotton, Iigloves ezimhlophe zeCotton Grip, Imisonto yePotton, I-Cotton glove,